वीरगन्जमा कविता संग्रह “मधुरस” विमोचन
वीरगन्ज, ३ चैत । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारी लीला बल्लभ नेपालद्वारा रचित कविता संग्रह “मधुरस” को विमोचन कार्यक्रम भन्सारकै सभा हल कर्मचारी मिलन केन्द्रमा शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षामा सुधारका लागि अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रमुख यादव
राकेश यादव, रौतहट, ३ चैत । रौतहट जिल्लाको बौधिमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ सरमूजवामा अवस्थित श्री प्राथमिक विद्यालयको आयोजनामा सम्मान तथा विदाई कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
१८ दिनपछि रेशम चौधरीको आमरण अनसन तोडियो
काठमाडौं, २ चैत । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीले १८ दिनपछि आमरण अनसन तोडेका छन् ।
ओलीको मन्त्रिमण्डल २२ सदस्यीय, मधेशी अनुहार चार मात्र (नामावलीसहित)
काठमाडौं, २ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार तेस्रोपल्ट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । योसँगै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय पुगेको छ भने मधेशी अनुहार जम्मा चार जना मात्र छन् ।
सर्लाहीमा बस दुर्घटनामा १९ जना घाइते
सर्लाही, २ चैत । हरिवन नगरपालिका–४ तिनघरे चोकमा ना.४ ख ६०५८ नम्बरको यात्रुबाहक बस शुक्रबार आफै अनियन्त्रित भई पल्टिन जाँदा बसमा सवार ईश्वरपुर नगरपालिका बस्ने ३५ वर्षीया कुन्तीकुमारी महतो लगायत १९ जना घाइते भएका छन् ।
राजपालाई सरकारमा नजान भन्दै वीरगन्जमा खबरदारी र्याली
वीरगन्ज, २ चैत । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल आबद्ध राजपा युवा संगठन पर्साले सरकारमा नजान खबरदारी र्याली निकालेको छ ।
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाममा झुल ओढेर सांकेतिक विरोध
जनकपुरधाम, २ चैत्र । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाममा लामखुट्टे आतंकलाई नियन्त्रणका लागि स्थानीय युवाहरुले बिहानै झूल ओढेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपालगञ्ज रेलमार्ग सर्भे सुरु
बाँके, २ चैत । भारतीय सहर रुपैडियादेखि बाँकेको कोहलपुरसम्म निर्माण गर्ने भनिएको नेपालगन्ज रेलमार्ग निर्माणको सर्भेको काम सुरु भएको छ । रेलमार्गको सर्भे गर्ने जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी आरके टेक्नोले मंगलबार नेपालगन्जमा आएर सर्भेको काम सुरु गरेको हो ।
नेपाल–भारत रेमिटेन्स सेवा शुरू
काठमाडौं, १ चैत । नेपालस्थित आइएमई लिमिटेड र भारत स्थित मुथुत फाइनान्सले बिहिबारदेखि भारत–नेपाल रेमिटेन्स सेवा शुरूवात गरेका छन् ।
मन्त्री सोनलद्वारा मेगा वीरगन्ज महोत्सव उद्घाटन
वीरगन्ज, १ चैत । मेगा विरगंज महोत्सव २०७४ को भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलद्वारा आदर्शनगर रंगशालामा उद्धघाटन सम्पन्न भएको छ ।
मोरङ, १ चैत । पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–४ जरायो टोल बस्ने १५ वर्षीया युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
आपसी झगडामा कुटपिट हुँदा एकको मृत्यु
बारा, १ चैत । प्रसौनी गाउँपालिका–३ प्रसौनी बस्ने ६५ वर्षीय गनपत राउत कुर्मीको आपसी झगडामा कुटपिट हुँदा मृत्यु भएको छ ।
सप्तरीमा करिब दुई लाखको आगलागीबाट क्षति
सप्तरी, १ चैत । तिरहुत गाउँपालिका–५ बस्ने कैलु ठाकुरको घरमा बिहीबार आगलागी हुँदा अन्नपात, भाडावर्तन, लत्ताकपडा, नगद ८ हजार रुपैयाँ गरी करीव १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर क्षति भएको छ ।
भारतीय राजदूतावासले काठमाडौं उद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्ने
काठमाडौं, १ चैत । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।
न्यायालयको विवाद दुर्भाग्यपूर्ण : नेता कर्ण
काठमाडौं, १ चैत । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायालयमा अहिले देखिएको विवाद दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सीके राउतसँग ‘सेल्फी’ लिन सर्वसाधारणको भीड
राकेश यादव, रौतहट, ३० फागुन । नेपालमा कुनै सेलिब्रिटीभन्दा कम क्रेज छैन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सीके राउतको । उनी काठमाडौं आउँदा वा अन्य कुनै जिल्लामा जाँदा सर्वसाधारणहरु राउतसँग एउटा सेल्फी लिन पछि पर्दैनन् ।
मोरङ, ३० फागुन । रतुवामाई नगरपालिका–१० मा आगलागी हुँदा डेढ लाखको क्षति भएको छ । ठकठके बस्ने धनबहादुर राईको कच्ची घरमा बुधबार आगलागी भएको थियो । आगलागीबाट करीव १ लाख ५० हजार रुपैयाँ
चितवन, ३० फागुन । रत्ननगर नगरपालिका–७ बस्ने ५० बर्षीया पनमी थरुनीको जंगली हात्तीको आक्रमणबाट बुधबार मृत्यु भएको छ । सोही ठाउँस्थित खोरश्वर मध्यवर्ति बनमा घाँस काटन गएको अवस्थामा उनलाई जंगली
प्रहरी कार्यालय भवन शिलान्यास
सुनसरी, ३० फागुन । प्रदेश नं. १ कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पशुपति उपाध्यायले ईलाका प्रहरी कार्यालय दुहवीको नयाँ भवन निर्माण कार्यको बुधबार आयोजित एक समारोहबीच शिलान्यास गरेका छन् ।
रक्षामन्त्री र भारतीय राजदूतबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौं, २९ फागुन । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा भेटघाट भएको हो ।